Sertraline (ဆာထရာလိုင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Sertraline (ဆာထရာလိုင်း)
Sertraline (ဆာထရာလိုင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Sertraline (ဆာထရာလိုင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Sertraline (ဆာထရာလိုင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Sertraline ကို စိတ်ကျရောဂါ၊ရုတ်တရက် စိတ်အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ပူပန်လှုပ်ရှားခြင်း၊တစုံတခုကိုအလွန်အမင်းစိတ်စွဲနေသည့် စိတ်ရောဂါ၊မတော်တဆမှုတခုခုကြုံတွေ့ရပြီးနောက် စိတ်ဖိစီးခြင်း၊စိတ်ကျခြင်း ခံစားရသည့် ရောဂါ၊ လူအများနှင့်ရောနှောဆက်ဆံရမည်ကို ကြောက်ရွံ့သည့် စိတ်ရောဂါ နှင့် ဓမ္မတာမလာမီ အလွန်အမင်း စိတ်ကစဉ့်ကလျား ဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ကို ကုသရန် အသုံးပြုသည်။
ဤဆေးသည် သင်၏စိတ်အခြေအနေ၊အိပ်စက်မှု၊အစားအသောက်စားလိုစိတ် နှင့် အားအင်တို့ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေမည်ဖြစ်ပြီး သင့်အနေဖြင့် သင်၏နေ့စဉ်ဘဝနေထိုင်သွားလာမှုများတွင် ပြန်လည်စိတ်ပါဝင်စားလာစေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Sertraline သည် ကြောက်ရွံ့မှု၊စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊မလိုလားအပ်သော အတွေးများကို လျော့နည်းစေမည့်အပြင် ရုတ်တရက် အလွန်အမင်း စိတ်လှုပ်ရှားသည့် အခြေအနေများကိုလည်း နည်းပါးစေမည် ဖြစ်သည်။
အရေးမကြီးသော ကိစ္စတခုခုကို(ဥပမာ။ ။ လက်ဆေးခြင်း၊ ကိန်းဂဏန်းများကို ရေတွက်ခြင်း၊ တံခါးပိတ်ထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း) ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် နေ့စဉ်ပုံမှန်နေထိုင်သွားလာမှု ထိခိုက်လာခြင်းကိုလည်း Sertraline က လျော့ပါးသက်သာစေသည်။Sertraline သည် Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) ဟုခေါ်သော ဆေးအမျိုးအစားတမျိုးဖြစ်သည်။၎င်းသည် ဦးနှောက်အတွင်းရှိ သဘာဝပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သော serotonin၏ ပမာဏကို သင့်တင့်မျှတမှု ရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ေ
Sertraline (ဆာထရာလိုင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Sertraline ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း (အများအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ် —>မနက် သို့မဟုတ် ညနေ) သောက်သုံးပါ။Sertraline ဆေးပြား ကို အစာရှိသည်ဖြစ်စေ၊မရှိသည်ဖြစ်စေ သောက်နိုင်သည်။ ဆေးတောင့်သောက်လျှင်မူ နံနက်စောစောစာ စားပြီးချိန် သို့မဟုတ် ညနေစာ စားပြီးချိန်တို့တွင် သောက်ရမည်။
အကယ်၍ သင်သည် Sertraline ကို ဓမ္မတာမလာမီအချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် ပြဿနာများအတွက် သုံးစွဲလျှင် သင့်ဆရာဝန်က သင့်ကို အောက်ပါ ပုံစံ၂မျိုးထဲမှ ၁မျိုးဖြင့် သုံးစွဲခိုင်းလိမ့်မည်။ ပထမပုံစံမှာ ဆေးကို နေ့စဉ် တလလုံးသောက်သည့် ပုံစံဖြစ်ပြီး နောက်တမျိုးမှာ ဓမ္မတာမလာခင် ၂ပတ်အလိုမှ စ၍ ဓမ္မတာလာချိန်အထိ သောက်သည့် ပုံစံဖြစ်သည်။
သင့်ရောဂါအခြေအနေနှင့် ဆေးကို တုန့်ပြန်မှုတို့အပေါ်မူတည်၍ ဆေးပမာဏကို ချိန်ဆရမည်ဖြစ်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို တတ်နိုင်သမျှလျော့နည်းစေရန် သင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးပမာဏနည်းနည်းမှ စတင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို တဖြည်းဖြည်း တိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရန် အထူးအရေးကြီးသည်။ ဆေးအာနိသင် အများဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး ရစေရန် ဆေးကို အချိန်မှန်မှန် သောက်သုံးပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း တူညီသော အချိန်တခုတည်းတွင် သောက်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ရောဂါသက်သာလာသည့်တိုင် ဆေးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့်ကာလအတိုင်း ဆက်လက်သောက်ရန် လိုအပ်ပြီး ဆရာဝန်ကို အသိမပေးဘဲ ဆေးသောက်ခြင်းကို ရပ်မပစ်ရပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆေးကိုရုတ်တရက် ရပ်လိုက်လျှင် အချို့သော ရောဂါအခြေအနေများသည် ပိုဆိုးလာနိုင်၍ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် စိတ်အတက်အကျမြန်ခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊အိပ်စက်သည့် အလေ့အထများ ပြောင်းလဲခြင်း နှင့် ရုတ်တရက် ဓါတ်လိုက်သကဲ့သို့ ခေတ္တခံစားရခြင်း စသည်တို့ကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ရှောင်လွှဲနိုင်ရန် ဆေးကို တိကနဲမရပ်ဘဲ ပမာဏကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့ချသွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသော ဘေးထွက်လက္ခဏာအသစ်များကိုခံစားရခြင်း သို့မဟုတ် ရောဂါအခြေအနေပိုဆိုးခြင်းတို့ ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကို အမြန် အကြောင်းကြားပါ။
Sertraline (ဆာထရာလိုင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Sertraline ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Sertraline ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Sertraline ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Sertraline ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Sertraline ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Sertraline (ဆာထရာလိုင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။Sertraline ဆေးသောက်သုံးမည်ဆိုလျင် အောက်ပါအခြေအနေများကို သတိထားသင့်သည်။
Sertraline ဆေးနှင့် သို့မဟုတ် အခြားသောဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများ ခံစားရဖူးပါက ဆရာဝန်ကို သေချာစွာအသိပေးပါ(ဆေးသာမက အစားအသောက်၊ဆိုးဆေး၊အစားအစာများကို တာရှည်ခံအောင်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများပါ အကျုံးဝင်သည်)။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်ဆေးမဟုတ်ပါက ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
ကလေးငယ်များတွင် Sertraline ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လုံလောက်စွာ သုတေသနပြုလုပ်ထားခြင်း မရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် ဆေး၏ အကျိုးအာနိသင်ထိရောက်မှု သို့မဟုတ် လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို မသိရှိနိုင်ပါ။ လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များအရ ကလေးများတွင် Obsessive-compulsive disorder (ကိစ္စတခုကို အကြောင်းမရှိဘဲ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်ခြင်း) အတွက် Sertraline ၏ အသုံးဝင်မှု ဆေးစွမ်းကို ကန့်သတ်စေမည့် ပြဿနာမရှိသေးပါ။ သို့သော် ၆နှစ်အောက်ကလေးများတွင် ဆေး၏ အကျိုးအာနိသင်ထိရောက်မှု သို့မဟုတ် လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို မသိရှိနိုင်ပါ။
လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များအရ သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် Sertraline ၏ အသုံးဝင်မှု ဆေးစွမ်းကို ကန့်သတ်စေမည့် ပြဿနာမရှိသေးပါ။ သို့သော် သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် ဆေးဒါဏ်ကို လူငယ်များထက်ပို၍ခံရမည်ဖြစ်ပြီး သွေးတွင်းဆိုဒီယမ်ဓါတ်နည်းပါးသည့် ပြဿနာကြုံတွေ့နိုင်ချေပိုများပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသက်ကြီးသူများတွင် ဆေးပမာဏကို ပိုမိုသတိထား၍ ချိန်ဆရန်လိုအပ်လှပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Sertraline (ဆာထရာလိုင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Sertraline (ဆာထရာလိုင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အင်ပြင်များထွက်ခြင်း၊အသက်ရှုရ ခက်ခဲလာခြင်း၊မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊လျှာ သို့မဟုတ် လည်ချောင်းတို့ ရောင်ရမ်းခြင်း အစရှိသော ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများ ခံစားလာရပါက အရေးပေါ်ကုသမှုကို ခံယူရပါမည်။ အခြားသော ဘေးထွက်လက္ခဏာအသစ်များကိုခံစားရခြင်း သို့မဟုတ် ရောဂါအခြေအနေပိုဆိုးခြင်းတို့ ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကို အမြန် အကြောင်းကြားပါ။(ဥပမာ။ ။ စိတ်နေစိတ်ထားပြောင်းလဲလာခြင်း၊စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်များခြင်း၊အလွန်အမင်းစိတ်လှုပ်ရှား ဂဏှာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊အိပ်မပျော်ခြင်း၊ စိတ်မရှည်ခြင်း၊ စိတ်တိုစိတ်ဆတ်ခြင်း၊ ရန်လိုခြင်း၊ဒေါသဖြစ်လွယ်ခြင်း၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံမှန်ထက်ပို၍ တက်ကြွနေခြင်း၊ပို၍ စိတ်ဓါတ်ကျသွားခြင်း၊သတ်သေချင်သည့် သို့မဟုတ် မိမိကကိုယ်ကို နာကျင်အောင်လုပ်ချင်သည့် အတွေးများ ပေါ်လာခြင်း စသည်)။
• အောက်ပါ ဆိုးရွားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ခံစားရပါကလည်း ဆရာဝန်ကို အမြန်အကြောင်းကြားပါ။
• ကြွက်သားများ အလွန်မာတောင့်တင်းနေခြင်း၊အဖျားကြီးခြင်း၊ချွေးပျံခြင်း၊စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း သို့မဟုတ် မမှန်ခြင်း၊မေ့လဲသွားတော့မယောင် ခံစားရခြင်း။
• ဒေါသထွက်လွယ်ခြင်း၊ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊အလိုလျောက်တုံ့ပြန်မှုများ ပုံမှန်ထက်များနေခြင်း၊ခြေလက်များ ကတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်း။
• ပျို့အန်ခြင်း၊ဝမ်းလျှောခြင်း၊အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊မတည်မငြိမ်ခံစားရခြင်း၊ခန္တာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အာရုံကြောများအကြား ဟန်ချက်ညီညီဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ခြင်း။
• ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊အာရုံမစုစည်းနိုင်ခြင်း၊မေ့တတ်ခြင်း၊အားနည်းခြင်း၊သတိလစ်သွားခြင်း၊တက်ခြင်း၊ဖြည်းညင်းစွာ အသက်ရှူခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ရှုရပ်သွားခြင်း။
• မူးဝေးထိုင်းမှိုင်းလေးလံခြင်း၊ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သလို ခံစားနေရခြင်း။
• အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ကိုယ်အလေးချိန် ပြောင်းလဲခြင်း။
• လိင်စိတ်နည်းပါးခြင်း၊မြုံခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံရာတွင် အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရန် ခက်ခဲခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Sertraline (ဆာထရာလိုင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Sertraline ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးတွေကိုသုံးစွဲနေတယ်ဆိုရင် Sertraline ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ သင့်ဆရာဝန် အနေနဲ့ Sertraline ကို အသုံးမပြုတော့တာဘဲဖြစ်ဖြစ် သင်သုံးစွဲနေတဲ့ အခြားဆေးတွေကို ပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးများကို ယေဘုယျအားဖြင့် Sertraline နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့မရှိပါဘူး။ သို့သော် အချို့သော အခြေအနေများတွင်မူ သုံးစွဲကောင်းသုံးစွဲပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို သောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးတမျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး၏ ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသောက်ရမည့် အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
• Antithrombin III Human
အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးများသည် Sertraline ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပို၍ဆိုးကောင်းဆိုးစေနိုင်သည်။ သို့သော် အတူတကွ သုံးစွဲခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးသော ကုသမှုရလာဒ်ကိုလည်း ရစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို သောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးတစ်မျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး၏ ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသောက်ရမည့် အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Sertraline (ဆာထရာလိုင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Sertraline က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Sertraline (ဆာထရာလိုင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Sertraline ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
• သွေးနှင့်ပတ်သတ်သော ပြဿနာများရှိခြင်း။
• သွေးတွင်း ဆိုဒီယမ်ဓါတ်နည်းခြင်း။
• တစ်စုံတခုကို အလွန်စွဲလမ်းနေသည့် စိတ်ရောဂါရှိခြင်း။
• အရေပြားတွင် ခရမ်းရောင် သို့မဟုတ် နီညိုရောင် အကွက်များထွက်ဖူးခြင်း။
• အတက်ဝေဒနာ ခံစားဖူးခြင်း ———> ရောဂါအခြေအနေကို ပိုဆိုးစေသဖြင့် သတိထားသုံးစွဲပါ။
• အသည်းရောဂါရှိခြင်း ———>ဆေးကို ခန္တာကိုယ်ထဲမှ စွန့်ပစ်ရာတွင် ပုံမှန်ထက် ပိုကြာသဖြင့် ဆေး၏ အာနိသင်လိုသည်ထက် ပို၍သက်ရောက်ခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Sertraline (ဆာထရာလိုင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Sertraline ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
—–>ကနဦးဆေးပမာဏ ——->၅၀မီလီဂရမ်ကို တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ်သောက်ရမည်။ ထို့နောက် ၅၀မီလီဂရမ်စီကို အများဆုံး တစ်ပတ်လျှင်တစ်ခါနှုန်းဖြင့် တိုးပေးနိုင်သည်။
—–>ဆက်လက်ထိန်းထားရန်ဆေးပမာဏ ———–> အများဆုံးပမာဏအနေဖြင့် တစ်နေ့လျှင် ၂၀၀မီလီဂရမ်ရောက်သည်အထိ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ခါ တိုးပေးနိုင်သည်။
Obsessive Compulsive Disorder (၊တစ်စုံတခုကိုအလွန်အမင်းစိတ်စွဲနေသည့် စိတ်ရောဂါ) အတွက်
Panic Disorder (ရုတ်တရက် စိတ်အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ပူပန်လှုပ်ရှားသည့် စိတ်ရောဂါ)အတွက်
—–>ကနဦးဆေးပမာဏ ——->၂၅မီလီဂရမ်ကို တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ်သောက်ရမည်။ တပတ်ကြာပြီးနောက် ၅၀မီလီဂရမ် တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ်သို့ တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ထို့နောက် ၅၀မီလီဂရမ်စီကို အများဆုံး တစ်ပတ်လျှင်တစ်ခါနှုန်းဖြင့် တိုးပေးနိုင်သည်။
—–>ကနဦးဆေးပမာဏ ——->၂၅မီလီဂရမ်ကို တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ်သောက်ရမည်။ တစ်ပတ်ကြာပြီးနောက် ၅၀မီလီဂရမ် တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ်သို့ တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ထို့နောက် ၅၀မီလီဂရမ်စီကို အများဆုံး တစ်ပတ်လျှင်တစ်ခါနှုန်းဖြင့် တိုးပေးနိုင်သည်။
လူအများနှင့်ရောနှောဆက်ဆံရမည်ကို ကြောက်ရွံ့သည့် စိတ်ရောဂါ အတွက်
ဓမ္မတာမလာမီ အလွန်အမင်း စိတ်ကစဉ့်ကလျား ဖြစ်ခြင်းအတွက်
—–>ကနဦးဆေးပမာဏ ——->၅၀မီလီဂရမ်ကို တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ်သောက်ရမည်။
ဆေးကို နေ့စဉ် တစ်လလုံးသောက်သည့် ပုံစံ နှင့် ဓမ္မတာမလာခင် ၂ပတ်အလိုမှ စ၍ ဓမ္မတာလာချိန်အထိ သောက်သည့် ပုံစံ ၂မျိုးရှိသည်(သင့်ဆရာဝန်၏ ရွေးချယ်မှုအပေါ်မူတည်သည်)။
၅၀မီလီဂရမ်ကို တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သောက်သော်လည်း မထူးခြားသည့် အမျိုးသမီးများအတွက် ဓမ္မတာတစ်ကြိမ်လာချိန်တိုင်း ၅၀မီလီဂရမ်စီကို အောက်ပါအတိုင်း တိုးပေးနိုင်သည်။
—–>ဆေးကို နေ့စဉ် တစ်လလုံးသောက်သည့် ပုံစံတွင် ၁၅၀မီလီဂရမ်ထိ တိုးပေးနိုင်သည်။
——>ဓမ္မတာမလာခင် ၂ပတ်အလိုမှ စ၍ ဓမ္မတာလာချိန်အထိ သောက်သည့် ပုံစံတွင် ၁၀၀မီလီဂရမ်ထိ တိုးပေးနိုင်သည်။ (အကယ်၍ ၁၀၀မီလီဂရမ်ကို တနေ့လျှင် တကြိမ်သောက်ရသည့် ပမာဏသို့ ရောက်ရှိလျှင် ပထမသုံးရက်တွင် ၅၀မီလီဂရမ် အရင်ပေးရမည်။၁၀၀မီလီဂရမ် တန်းမပေးရ။)
ကလေးတွေအတွက် Sertraline (ဆာထရာလိုင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Sertraline (ဆာထရာလိုင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Sertraline ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးပြား : ၂၅၊၅၀၊၁၀၀ မီလီဂရမ်
• လိင်စိတ် သို့မဟုတ် လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများ ပြောင်းလဲခြင်း။
• အိပ်မပျော်ခြင်း။ ကြာကြာ အိပ်မပျော်ခြင်း။
• ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အန်ခြင်း။
• တစ်ကိုယ်လုံး မချုပ်ထိန်းနိုင်အောင် တုန်ခါခြင်း။
• ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း (အမှန်တကယ်မရှိသော အရာများကို မြင်နေရခြင်း၊မရှိသော အသံများကို ကြားနေရခြင်း)။
Sertraline ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Sertraline http://www.webmd.com/drugs/2/drug-1- 8095/sertraline-oral/sertraline-oral/details. Accessed July 15, 2016.
Sertraline https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697048.html. Accessed July 15, 2016.